Ny rim-pitrandrahana dia ny sisin'ny 5-PC amin'ny ankapobeny, antsoina koa hoe rim-dimy, vita amin'ny singa dimy izay misy ny sisiny, peratra fanidiana, seza vakana ary peratra roa. Ny haben'ny sisin'ny fitrandrahana malaza dia 25.00-25 / 3.5, 36.00-25 / 1.5, 27.00-29 / 3.0,28.00-33 / 3.5,17.00-35 / 3.5,19.5-49 / 4.0, 29.00-57 / 6.0, hatramin'ny 63 ″, ny sasany amin'ireo sisiny manomboka amin'ny habe 51 "ka hatramin'ny 63" dia 7-PC ihany koa. Ny sisin'ny fitrandrahana dia lanjany mavesatra, enta-mavesatra ary hafainganam-pandeha. HYWG dia manolotra peratra fitrandrahana avo lenta. Ny tombony ananantsika dia ny fananantsika ny vy fikosoham-bary izay mamokatra singa boribory toy ny peratra hidin-trano, flange, peratra sisiny, seza vakana irery, mitantana kalitao avo lenta izahay ary manolotra vidiny mirary.
Container Lift rim dia mahatratra ny stacker rim sy mpikirakira kaontenera banga Kalmar
Fepetra takiana amin'ny sisiny manainga fitoeran-javatra ary mahatratra ny sisin'ny stacker tena avo dia avo, mazàna dia mitondra enta-mavesatra be (mihoatra ny 20 taonina) ary haingam-pandeha, mamaky fitsapana be dia be 13.00 x 33 izahay izay mivoaka amin'ny stackers sy mpikirakira kaontenera foana mazàna mihazakazaka eny amin'ny toerana tsara. Ny fomba EM dia saika vaky foana ao amin'ny lalotra peratra hidin-trano ary mahazo fiainana fohy 2 ka hatramin'ny 3 fanovana kodiarana izy ireo. Ny sisin'ny EV dia manome antsika fiainana lava mety 5 ka hatramin'ny 6 fanovana kodiarana, vokatr'izany dia mieritreritra aho fa hitondra ny enta-mavesatra ny EV rim rehefa avo dia avo izany fa ny hafainganana kosa dia mila tazonina ho miadana araka izay azo atao ary tsara toy ny azo atao. Ny iray amin'ireo tombony azon'ny HYWG dia ny famokarantsika samirery ireo singa rim rehetra ao anatin'izany ny EM sy ny fomban'ny tatatra, ny seza misy vava ary ny peratra hidin-trano, manolotra kalitao azo antoka sy vokatra feno manomboka amin'ny sisiny kely indrindra ka hatramin'ny sisiny lehibe indrindra izahay.
Ireo singa OTR Rim dia samy hafa habe amin'ny 8 ″ ka hatramin'ny 63 ″
Singa faribolanadia peratra fanidiana, peratra sisiny, seza vakana, lakile familiana ary flange ho an'ny karazan-jaza samihafa. We HYWG dia iray amin'ireo mpanamboatra vitsivitsy afaka mamokatra roasinga amin'ny sisinyary feno ny sisiny. Nanomboka tamin'ny faran'ny taona 1990 dia nanomboka namokatra HYWGsinga manodidinaary efa mamatsy ireo mpitarika ny sisin'ny OTR manerantany toa an'i Titan sy GKN. Androany HYWG dia mananasinga manodidina manomboka amin'ny habe 8 ″ ka hatramin'ny 63 ″, manomboka amin'ny singa OTR ka hatramin'ny sisin'ny forklift, rehetra singa manodidina 100% vita amin'ny trano, manolotra kalitao azo antoka sy vidiny mirary izahay.
Fitrandrahana harena ankibon'ny tany Sinoa OEM mpanamboatra haben'ny 33 ″ ka hatramin'ny 63 ″
Ny rim-pitrandrahana dia karazana OTR ihany koa ary ampiasaina indrindra amin'ny milina fitrandrahana toy ny kodiarana lehibe, dozer, kamio fanary sns. Ny sisin'ny fitrandrahana simba dia mety hiteraka lozam-pifamoivoizana lehibe sy fatiantoka ara-toekarena goavana, mila atokisana sy mendrika itokisana izy io. HYWG dia manolotra peratra fitrandrahana avo lenta.
ny forklift rim dia mivondrona miaraka amin'ny kodiarana handray fiara mavesatra sy mihodina haingana amin'ny toe-javatra samihafa. Tabilao forklift dia manakiana ny androm-piainan'ny forklift ary ny fahombiazan'ny fiasa, tsara forklift rim afaka mitondra lanja mavesatra ary manampy ny forklift mihodina milamina sy mahomby. Tena zava-dehibe ho an'ny forklift ny manana matanjaka, azo antoka ary mora apetakaforklift rim. Ny vokatray HYWGforklift rim safidy tsara ho an'ny tompona forklift satria noporofoinay ny kalitao, ny vidiny tsara ary ny sisin'ny forklift feno ho an'ny ankamaroan'ny marika. Izahay dia mpanamboatra sisin'ny OEM ho an'ny anarana lehibe toa an'i Linde sy BYD.
Tabilao indostrialy ho an'ny mpamorona China mpamokatra Tele finday Boom
Isisin'ny indostrialy dia ampiasain'ny fiara maro be toy ny fananganana boom, tracteur, crane, tele handler, backhoe loader, excavator wheel sns. molotra indostrialy noho izany dia sarotra ny manasokajy azy ireo. Fa ny ankamaroan'izy ireo dia rafitra 1-PC ary ny habeny dia ambanin'ny 25 santimetatra. Nanomboka tamin'ny 2017 HYWG nanomboka namokatramolotra indostrialy satria be ny mpanjifanay OE manana ny fangatahana. Volvo Korea dia nangataka ny HYWG hivoatramolotra indostrialy ho an'ny roller sy excavatoran'ny kodia. Ny vondrona Zhongce Rubber dia nangataka ny HYWG hivoatramolotra indostrialy ho an'ny fananganana boom. Noho izany tamin'ny taona 2020 dia nanokatra orinasa vaovao tao amin'ny faritanin'i Jiaozuo Henan i HYWG hifantoka amin'nysisin'ny indostrialy Producion, ny fahafaha-manao isan-taona an'ny molotra indostrialy dia natao 300 000 isan-taona.
OTR Rim singa Sina OEM mpanamboatra singa 25 ″
Singa faribolana dia peratra fanidiana, peratra sisiny, seza vakana, lakile familiana sy flange ilany ho an'ny karazan-tsivalana samihafa toa ny 3-PC, 5-PC & 7-PC OTR rims, 2-PC, 3-PC & 4-PC forklift rims. ny 25 ″ no haben'ny mahazatra singa manodidina satria maro ny mpandeha kodiarana, mitondra hazakaza ary mpanaparitaka no mampiasa sisiny 25 ″. Singa faribolana dia manakiana ny kalitaon'ny toetr'andro sy ny fahaizany. Ny peratra hidin-trano dia mila manana elastika marina mba hahazoana antoka fa manidy ny sisiny izy mandritra izany fotoana izany mora idina sy alefa. Ny seza vakana dia manakiana ny fahaizan'ny sisiny, mitondra enta-mavesatra lehibe amin'ny sisiny izy. Ny peratra sisiny no ampahany mifandray amin'ny kodiarana, mila matanjaka sy marina izy io mba hiarovana ny kodiarana.